Cayaaraha miisaanka rida si dagdaga - Caafimaad tips
Home / Caafimaadka / Fitness / Cayaaraha miisaanka rida si dagdaga
Cayaaraha miisaanka rida si dagdaga
Admin March 31, 2020 Caafimaadka, Fitness
Qof kastaa wuxuu rabaa inuu yeesho jidh dhisan oo qurux badan laakiin qofna ma rabo inuu ahaato qof cayil ama buuran sidaa darteed si aad miisaankaaga u dhinto isla markaana u ahaato qof qaab ahaan soo jiidasho leh markaa waxaa u baahan tahay inaad gubto kalooriyo ka badan inta aad cunayso.
Sida miisaanka loo rido
Run ahaantii jimicsiga iyo cayaaraha waxay gubaan dux aad u badan oo jidhkaaga ah sidaa daraadeed inaad miisaanka dhinto waxay ku xidhan tahay tirada ama xadiga kalooriyada aad gubayso iyo nooca cayaaraha aad samayso.
Cayaaraha miisaanka dhima
Valleyball : cayaarta loo yaqaano valleyball waa kubada si kooxa ah loo cayaaro waxayna ka shaqaysiisaa murqaha jidhka guud ahaan ilaa garbaha ilaa caloosha sidaa darteed hadii aad si joogta ah u cayaarto valleyball waxaad si dagdaga u gubaysaa baruurta jidhka isla markaan miisaan dhimis ayaad samaynaysaa.
Dabaasha : sida ugu fudud ee loo yeesho six pack waxaa ugu horaysa dabaysa waayo qofka oo caado ka dhigta dabaasha waxay ka caawinaysaa inay xooga saarto murqaha caloosha sidoo kale waxay dabaashu gubtaa tamar badan oo jidhka ku kaydsan taas oo hadii aan la gubin qofka ka dhigta mid buuran ama cayil, hadaba hadii aad rabto inaad miisaanka u dhinto si dagdaga ku dadaal dabaasha.
Akhriso faaiidooyinka Qubayska
Jimicsiga iskala bixinta : ayaa isaguna kamida cayaaraha miiisaanka rida hadaba jimicsiga noocan ah waxaa loo yaqaanaa Gymnastics sidaa darteed waa mid kamida qaababka ugu wanaagsan ee loo dhiso jidhka gaar ahaan caloosha murqaha garbaha ilaa kuwa jidhka oo idil.
Akhriso faaiidooyinka socodka
Kubada cagta : waynu naqaanaa dhammaanteen cayaartan laakiin kubada cagtu waxay u baahan tahay inaad leedahay xawaare xoog leh iyo muruqyo awood leh si aad u cayaarto kubada cagta sidaa darteed hadii aad si joogto ah u cayaarto waxaad ka dhaxlaysaa inaad yeelato murqo dhisan gaar ahaan kuwa loo yaqaano six pack, kuwa lugaha iyo guud ahaan jidhkaaga oo idil oo qurux badnaada qaab ahaan.
Hadaba hadii aad rabto inaad yeelato qaab aad u qurux badan ku dadaaal cayaaraha aynu sheegnay